China Slow Speed ​​Manual Jelly Glue ifektri kanye nabaphakeli | IGelken
I- i-jelly glue eshisayo ibizwa izinhlaka zamaprotheni. Ingxenye eyinhloko i-gelatin. Ayinayo i-benzene formaldehyde solvents, futhi ngeke iholele ekungcolisweni kokudla nezimpahla ezihlanganisiwe.
Ijubane lokomisa lolu hlobo lwe fihla ingcina ihamba kancane, futhi ingaphezulu liyi-glue lephepha. Ingcina inamathele, futhi ngeke kuqiniswe ngesikhathi eside sokuvula. Lokhu kuvumela isikhathi esanele semanuwali ukuthi qedela ukukhiqizwa kwayo.
Kunezinto ezimbalwa okufanele sizinake lapho sizisebenzisa
1. I-jelly glue ukwakheka okususelwa emanzini. Uma uyisebenzisa, kufanele silungise i-viscosity nokugxila ngaphandle kokungeza amanzi. I-viscosity kufanele ilungiswe ngamanani amancane nangezikhathi eziningi ize ilunge. Ukwengeza amanzi amaningi ngeke kube okunamathelayo.
2. I-glue isetshenziswa ku-50-65C, ibhekisa ekushiseni kweglue esikhundleni sethempelesha yedivayisi yokushisa.Kunephutha ekushiseni kwangempela, i-mercury noma i-mercury thermometer iyadingeka ukukala izinga lokushisa Ukushisa komshini ngokuvamile kuvame ukuba ngu-15 -20 degrees Celsius ngaphezu kokushisa kweglue.
3. Inani lokulinganisa alingcono kakhulu. Kuya ngephepha nekhadibhodi.Ukulinganisa okufanele kufanele kukwazi ukubopha ngokuqinile.
4. Iglu yezilwane ihlukile kunhlaka yamakhemikhali. Uma iphepha elihlanganisiwe ligcotshiswe ngokweqile noma lifakwe ipulasitiki ngokweqile, ngeke linanyathiselwe esivumelwaneni. Uma idinga ukuthi inanyathiselwe kangcono, ungayishintsha.Izingxenye eziboshiwe ziphathwa nge-corona ukubhubhisa izingqimba zikawoyela nezepulasitiki, ukuze ziboshwe kangcono.
5.Yenza isampula ngaphambi kokusebenzisa i-jelly glue ukuze uqiniseke ukuthi umkhiqizo wakho ulungele ukuhlangana ne-jelly glue (isilwane glue), uma kungenjalo, kufanele ukhethe enye ingcina efanelekile.
Langaphambilini Ijubane Elimaphakathi I-Jelly Glue
Olandelayo: Amathambo Ash